28 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 28 2013
28 / 05 / 2013 Levent Ozen 0
ကျောင်းသားများSamulaşနည်းနည်းမူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားများကို Samsun Samulaş၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ Gazi မူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားများအတွက်လည်းပေါ်လာတာဟာအရင်ပေါ်ခရီးသွားသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခဲ့ကြသည်ရထားလမ်းအာဏာပိုင်များနှင့် ပတ်သက်. Samulaşနေအလည်အပတ်ခရီးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပြီးနောက် [ပို ... ]
အရာအားလုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6လအတွင်းယူတံ့သောအာမေးနီးယားနှင့်အတူနယ်စပ်၏ဆောင်းဦးအဆင့်တွင်တစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ဘေးကင်းပတ်ဝန်းကျင်၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ် rails Edirne မှတက်၏ Sivas ရထားလမ်းရထားထံမှနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ပြည်နယ်မီးရထားနောက်ပိုင်းမှာရထားလမ်း 44 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ကြ [ပို ... ]
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ကသမ္မတ Gurbanguly Berdimuhamedov အာဖဂန်သမ္မတဟာမစ်ခါဇိုင်းတိုင်းပြည်ကိုဖိတ်ကြားထားသည်။ Berdimuhamedov နှင့်ဟာမစ်ကာဇိုင်းကတော့တာ့ခ်မင်နစ္စတန်-အာဖဂန်နစ္စတန်-Tajikistan ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏သဲအခမ်းအနားတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Berdimuhamedov နဲ့သူ့ရဲ့စာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယသမ္မတ Rashid Meredov ကိုဖိတ်ကြား [ပို ... ]
Düzceyမြန်ရထားရထားစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းပျံသန်းလာရထားမြန်နှုန်းရထားစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းပျံလာပါတယ်။ ပျံစီမံကိန်းပြီးစီးရန် Cilimli ရထား (တစ်လိုင်းပြေးရထား) တွင်စက်ရုံတစ်ရုံ 15 လက်ထက်၌ထိုတင်ပြချက်စေမည်။ အဆိုပါDüzceတစ်လိုင်းပြေးရထားအသွားအလာလျော့ပါးစေရန်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အတူ။ အစာရှောင်ခြင်းDüzce [ပို ... ]
သူကပထမဦးဆုံးအကြိမ် Adaray (အထူးအစီရင်ခံစာ) အတွက်သဘောပေါက်
Adaray Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏၎င်း၏ပထမဆုံးခရီးခေတ်မီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဘဝလျှက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ TCDD-Ray အလင်းရထားလမ်းကျွန်းများ၏သမ္မတကနေငှားရမ်းထား Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, 08.00 မှာယနေ့ Arifiye Adapazarı-line ကို၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ နှင့်အညီ Arifiye Adapazarı-စစ်ဆင်ရေး [ပို ... ]
RayHaber 28.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဧည့်ခံ E12 ရထားလမ်းမှာအလုပ်ဝန်ဆောင်မှုမှာ 1 အရေအတွက်အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသင့်လျော်သောကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်ရိုးရှင်းသောကတ်ကြေးအဆိုပါ gasket ၏alüminotermitအရင်းအမြစ်အဆိုပါလှေငြိမ်ထိန်းသောမြို့ရိုးဆောက်လုပ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုမော်ဒယ်စံကိုက်ညှိအကြားစက်လိုင်း tamping နှင့်အတူတက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပြုပြင်ရေးဖြစ်ဖို့ထားကြပါတယ် [ပို ... ]
Umraniye; Alemdağရိပ်သာလမ်းမြေအောက်တူးဖော်မှုများကြောင့်နှစ်စဉ်3မှပိတ်ပစ်ခဲ့သည်
Umraniye; Alemdağရိပ်သာလမ်းမြေအောက်တူးဖော်မှု3ကြောင့်နှစ်စဉ်လစာအာရုံစိုက်မှုမှပိတ်ပစ်ခဲ့သည် ... အစ္စတန်ဘူလ်Ümraniyeအဓိကလမ်းနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့လူကူးခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာမှအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါခရိုင်ရဲ့အလုပ်အများဆုံးမြေအောက်ရထားအရောင်းအများ၏တုံ့ပြန်မှုများကြောင့်ရိပ်သာလမ်းလမ်းပေါ်မှာ၏Alemdağ၏လုပျငနျးမှအသွားအလာမှအပိတ်ခံရဖို့ [ပို ... ]
Boluda ဓါတ်ရထားဆိုင်ကယ်ဒါမှမဟုတ် Phaeton ရှိတယ်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bolu မြူနီစီပယ်ဘို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ယာဉ်ကြောမှပိတ်ထားကြသည်တဲ့ Far East-ရထားမော်တော်ယာဉ်ကိုစမ်းသပ်ဆိုင်ကယ်နှင်ထုတ်အဖြစ်တင်ပြခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ စက်ဘီးရထားနှင့်အတူ Izzet Baysal လမ်း [ပို ... ]
အားလုံးလမ်းများနှင့်အတူ Cukurova လေဆိပ်တူရကီအတွက် Mersin မှလာကြလိမ့်မည်
ယနေ့များ၏အခြေခံပေါ်မှာတူရကီနှင့်အတူ Cukurova လေဆိပ် Mersin မှဖြစ်လိမ့်မည်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့အားလုံးလမ်းများနှင့်အတူ Mersin, တူရကီ Cukurova လေဆိပ်အားလုံးကိုလမ်းများပေါ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာအဖြစ်အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်လမ်း, ရထားလမ်းများနှင့်ဆိပ်ကမ်းကိုမြို့သူမြို့သားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတူရကီရဲ့ပါးရိုက်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက် [ပို ... ]
ငါတို့ရှိသမျှသည်နီးပါးရထား၏ကျမ်းပိုဒ်စဉ်အတွင်းဓါတ်ပုံကိုယူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင် ... အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Gaziantep အခမဲ့အစ္စတန်ဘူလ် Istiklal လမ်းအတွက် Forbidden ရထားအဖြစ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဧည့်သည့်လွမ်းဆွတ်ကျက်သရေကိုငါသိ၏။ Motorman အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း pose ပြုံး, ကဖို့အသုံးပြုရပါမည် [ပို ... ]
အဆိုပါအစာငတ်ခံနှင့်အတူရထား Gursu မှခြေလျင်ပြန်ကြွလာ
အဆိုပါအစာငတ်ခံ Gursu မှခြေလျင်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနောက်ကျောလာမယ့်နေသည်နှင့်အတူရထား; Bilecik-Eskişehirလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနေဆဲအပေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ တူ; ထိုကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ် Akdeniz Akdeniz Bilecik နှင့် Bursa-Line ။ စီမံကိန်းအရ, ဤအဆင့် 15 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, 7, 40 လိမ့်မည်ချီတက်ပွဲ viaducts [ပို ... ]
မော်စကို-ကာဇန်ကနေ 3,5 နာရီရထား
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်ချိန်းတွေ့တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအတူမော်စကို-ကာဇန်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေရထားနဲ့ 3,5 နာရီ, မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆက်လက်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတပူတင်က high-speed ကိုရထားစီမံကိန်းကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။ သတင်းစာ Komsomolskaya Pravda အဆိုအရ, [ပို ... ]
15 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကွင်းဆင်းဖို့ Kayseri ရထားလိုင်းအစိမ်းရောင်လယ်ကွင်း Size ကိုပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
15 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကွင်းဆင်းဖို့ Kayseri ရထားလိုင်း Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တူရကီအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအရွယ်အစားအစိမ်းရောင်လယ်ကွင်းပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်, ခဲကမ္ဘာပေါ်မှာထူးခြားသည်တစ်ဦးအလေ့အကျင့်နှင့်ယခု 15 ဘောလုံးကွင်းဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူမြို့ဖို့ရထားလိုင်းကို၏အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ယူဆောင် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Konya ဓါတ်ရထား Line နဲ့တည်ရှိနေကျောင်းပရဝုဏ် Tramway LINE (အထူးအစီရင်ခံစာ) ၏တိုးတက်မှုအတွက်ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း
လမ်းရထားလိုင်းကို၏ Konya Yaptırılacaktırတရားစီရင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဥပဒေရေးရာ Tramway လိုင်းကျောင်းပရဝုဏ်တိုးတက်မှုနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Tramway လိုင်းအမှတ် 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏လက်ရှိကျောင်းပရဝုဏ် Tramway လိုင်း KONYA စည်ပင်သာယာသိပ္ပံရေးရာတိုးတက်စေရန် [ပို ... ]
ရေးခွဆန့်ကျင် remote-control လေယာဉ်ပျံ
ရေးခွဂျာမဏီရဲ့အမျိုးသားရေးရထားလမ်းကုမ္ပဏီ Deutsche Bahn ဆန့်ကျင် remote-control လေယာဉ်, ဆေးသုတ်ကျမ်းစာ၌ရေးထားရေးခွကိုလေပေါ်မှာပမှရထားလမ်းများနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကြေညာခဲ့သည်နှင့်ဓာတ်ပုံများကာကွယ်တားဆီးဖို့ကင်မရာများတပ်ဆင်ထားသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပျံကိုအသုံးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဂျာမဏီ [ပို ... ]
ကြည်းတပ် Boztepe တစ်ခုတည်းစင်တာမထွက် cable ကိုကားဖြင့်ဆင်းသက်တော်ပျံ
ကြည်းတပ်ပျံသန်းဖို့တစ်ခုတည်းစင်တာတို့ကမထွက်နဲ့ဆင်းသက်ကြည်းတပ် Boztepe ကေဘယ်လ်ကား, လေထီးစီးခြင်းနိူးယခုနှစ်လစဉ်လတိုင်းကြိုဆိုသည်။ မီတာအမြင့်ခြင်းဖြင့် Boztepe ပျံသန်းမှုအနေဖြင့်မြို့လယ် 500 နှစ်အတွင်းတပ်မတော်အနေဖြင့် Paragliding နိူးလစဉ်လတိုင်း, သငျသညျအပြာနှင့်အစိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ် [ပို ... ]
xnumx.antaly သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများနှင့် Solutions ညီလာခံ
xnumx.antaly သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများနှင့် Solutions ညီလာခံ2။ Antalya သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ Conferences ကအဝေးပြေး2မှာစကားပြောသော။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mustafa karademir, Antalya ရဲ့မြောက်ပိုင်းလက်စွပ်လမ်းအတွက်နှောင့်နှေးသည့်ကုန်စည်ပြပွဲ xnumx'y အတူတက်ဖမ်းရန်ယခုနှစ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်ဆိုပါကပြောခဲ့သည်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ [ပို ... ]
Diyarbakir ရထားစနစ် Want
Diyarbakir Dicle တက္ကသိုလ် (Du) ကစစ်တမ်းများတွင် "Diyarbakir ပြည်နယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများ" ကလုပ်öğrencilerinindeရထားလမ်း, Diyarbakir က "ရထားလမ်း" ချင်သည်ထင်ရှားချင်တယ်။ စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်များဌာန, ကျောင်းသားများဖွငျ့ကပစ၏ညီလာခံခန်းမထဲမှာ Dicle တက္ကသိုလ် (Du), "Diyarbakir [ပို ... ]
ရထားလမ်းကုမ္ပဏီကြီးစီမံကိန်း၏တူရကီခြေထောက်သွားသမိုင်းဆိုင်ရာပိုးလမ်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူဆက်လက်။ တူရကီနိုင်ငံဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏အရေးကြီးစီမံကိန်းတစ်ခုမှာ။ အာရှဥရောပနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ် Marmaray'l, တူရကီကော့ကေးဆပ်ဖို့လမ်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ သံ [ပို ... ]
ဝန်ကြီးချုပ်ယင်းİZBAN Kocaoglu ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ဝန်ကြီးချုပ်ယင်းİZBAN Kocaoglu İZBANပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစား 1 အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စဉ်ကအစိုးရKocaoğlu'nunမှကျေးဇူးတင်စကားလာ၏။ အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အမျိုးအစားဆုရှင် Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် Joint Stock Company ကိုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ကျင်းပပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (UITP) World Congress တွင်, [ပို ... ]